Whole Night - Award Winning Sensual Story | NAJ Entertainment
Home Article Whole Night – Award Winning Sensual Story
Whole Night – Award Winning Sensual Story
“हजुर ।” मैले जवाफ दिएँ ।
“म पनि ट्याक्सी वेट गरिराखेको हेर्नु न अहिलेसम्म एउटा भेटेको छैन ।” युवतीले दुखेसो पोखी ।
मैले प्रश्न गरेँ – “कहाँ जानुपर्ने ?”
चोकबाट ५ मिनेटजति पश्चिमतिरको गल्लीमा हिडेपछि उसको डेरामा पुगियो । बस्तीमा चूक झैं चकमन्न रात घोप्टिएको थियो । धेरैका घरमा बत्ती निभीसकेका थिए । उसले कोठाको ताल्चा खोली र स्वीच अन गरी । इन्भर्टरबाट बलेका मधुरा चिमको प्रकाशमा उसले भुत्भुतिदै भनी – “लोडसेडिङ छैन भन्नु त गफै मात्र भो, हल्का हुरीबतास चल्दा बित्तिकै बत्ती गैहाल्ने !”
चारतले घरको भुँइतलामा उसले भाडामा दुईवटा कोठा लिएकी रहिछे । एउटा भान्छा र अर्को चाँहि सुत्ने कोठा ! भान्छा कोठाको भित्रबाटै सुत्नेकोठामा जानलाई ढोका रहिछ । कोठाभित्र छिरेपछि, ऊ चाँहि आफ्नो सुत्नेकोठामा छिर्दै भनी – “एकछिन पर्खिनुस है, म ड्रेस चेन्ज गरेर आउँछु ।” मैले स्वीकृतिसूचक मुन्टो हल्लाएर “ल, हुन्छ” को ईशारा गरेँ । ऊ भित्र छिरेको पाँच मिनेटमा नै म्याक्सी लगाएर भान्छामा आई ।
आउँदा बित्तिकै केहि नसोधी ग्यासचुलोमा दूध चिया बसाली । अनि मलाई भनी – “पहिले चिया पिऔं हैं !” मैले नाइँनास्ती गरिनँ । हुन्छको भावमा मुस्कुराएँ ।
अनि म तिर पुलुक्क हेर्दै उसले भनी –“लौ, चिया हेर्नु है त, उम्लेला नी ! म बाहिर सरकारी धाराको पानी लिएर आउँछु ।” ठ्याक्कै देवकी भाउजूले रामुदाईलाई अ¥हाए झैं उसले मलाई काम लगाई । मलाई अप्ठेरो लाग्यो ।
”कति टाइम लाग्ने हो ?” मैले हतास हुँदै भनेँ ।
जवाफ दिदै भनी – “यहि बाहिर के, घरकै कम्पाउन्ड भित्रै त हो, अहिले दशबजेपछि फेरि पानी बन्द हुन्छ !” नीलो रंगको एउटा बाल्टीन र तीनवटा जम्बो कोकको बोतल समातेर ऊ भान्छाबाहिर गई ।
पानी लिएर फर्कन पाँचै मिनेट पनि लागेन उसलाई ।
चिया उम्लेकाले मैले ग्यासचूल्हो बन्द गरिसकेको थिएँ । “ए, चिया पाकिसक्यो ?” पहिलो खेप पानी ल्याएपछि उसले भनी । यो पाली चाँहि आवाज निस्क्यो मेरो, भनेँ – “अँ, पाक्यो !”
“हजुर चिया राख्दै गर्नुस् म पानी लिन आउँछु ।” भन्दै, ऊ फुत्त बाहिर गई ।
हाम्रो चिया गफगाफ शुरु भो । उसले चिया पिउने क्रममै आलु ताछ्ने र काउली केलाउने काम समेत भ्याई । इन्भर्टरको उज्यालोमा उसको मुहार चम्किरहेको मैले राम्ररी नै देख्न पाएँ । उसले थाहा नपाउने गरी एकटक मैले उसलाई हेरिरहेँ । बिचबिचमा उसले मेरा ब्यक्तिगत कुराहरु सोधी । मैले कुरा नलुकाई खुलस्त पारिदिएँ । सोधेकी थिई – घरमा कोको हुनुहुन्छ ? भनेँ – एक्लो छोरो हुँ । अनि सोधी – बुबा आमा के गर्नुहुन्छ ? भनेँ – बुबा मालअड्डामा काम गर्नुहुन्छ, आमा नि.मा.वि. स्कुलको शिक्षिका हुनुहुन्छ । र, उसले अलिकति असहज लाग्ने कुरो पनि अरी – “हजुर ब्याचलर मात्र कि भर्जिन पनि ?” उसको यो प्रश्नले म एकदम सन्न भएँ । झन प्रश्न गरेपछि उसले यति कामुक तरिकाले आँखा सन्काई कि लाग्यो – केहि नसोचेर गर्लम्मै अङगालो हालूँ ! मैले केहि पनि बोलिनँ, र उसले पनि फेरि दोहो¥याएर सोधीने । गधापच्चिसे काट्दै गरेको लक्का जवानले अझै भर्जिनिटी गुमाएको छैन भन्नु, न उसले पत्याउने कुरो थियो न मेरो लागि खास गर्व गर्न लायकको कुरो नै । मनमन पनि यस्तो पनि लाग्यो – मोरीले फेरि नपुङ्शक ठानेर खाना पनि नखुवाई घर पठाउली ! त्यसकारण पनि मैले चुपचाप बस्नु मै उचीत ठानेँ ।
भात पाक्दै गरेको प्रेसरको सिठ्ठी बज्ने र बत्ति आउने एकैपटक भो । देखेँ, उसले आलु र काउली भुट्दै थिई । मैले मोबाईलमा समय हेरेँ । साढे दश बज्दै थियो । मैले टाइम हेरेको पत्तो पाईछ उसले जिस्किदै भनी – “ओहो, किन यस्तो अतालिनुभएको हो ? खाना पाक्दै छ, एकछिन नआत्तिनुस् !” मैले त चाहेको थिएँ, भनोस –“आज यतै बसे भैहाल्यो नी भोली बिहानै जानुहोला ।”
उसले गोलभेडाको चटनी पनि बनाई । उसको भर्भराउँदो वैंश भन्दा कमको देखिएन चटनी । मलाई चखाई पनि । चाखेको स्वादिलो रहिछ ! केहिबेरपछि खाना पस्की दुवैजनालाई, दालचाँहि बिहानको थियो र उसले तताएकी पनि थिई । उसले तयार पारेको खानाको पहिलो गाँस मुखमा पु¥याउँदै थिएँ, ऊ केही सम्झे झैं गरी, ग्यासचूल्होबाट बायाँपट्टि तीन हातपरको सानो दराज राखेको ठाउँमा पुगी अनि दराज खोली ।
“साँच्ची गाउँबाट पठाएको घिउ पनि छ, खानुहोला नी ?” दराजबाट सेतो शिशाको बोतलभरी राखेको घिउ झिकी ।
घिउसँग भात म नकार्नै सक्दिनँ । भनेँ – “भातसँग घिउ पाएपछि कसले नखाला?”
मेरो थालमा दुई चम्ची घिउ थप्दै गर्दा उसले जिस्किएरै भनी – “हजुरजस्ताले घिउ खाएर के गर्नु, बिनासित्ती चड्डीको विजोग !” उसको उत्ताउलोपनले मलाई निस्तेज पारिसकेको थियो । प्रतिक्रिया दिन खोज्दै थिएँ, भातको गाँस सड्कियो । उसले अतालिदै पानी दिई । मैले घटघटी पिउन थाले । सोच्दै – “पाएँ भने तेरो उन्मत्त योवन म यसैगरी घटघटी पिउँछु ।”
खाना खाएपछि आफूले खाना खाएको थाल आफै माझेँ । भन्न त भनेकी थिई – “ह्या, हजुर पनि कस्तो केटीजस्तो ? त्यही राख्नुस् म माझिहाल्छु नी !” मैले मानिनँ ।
ऊ खाना खादै थिई । मोबाइल हेरेको १२ बज्न १० मिनेट बाँकी थियो ।
“ओहो, १२ पो बज्न लागेछ ।” लामो सुस्केरा फेरेर मैले भनेँ –“लौ, हजुरलाई मीठो खाना ख्वाउनुभएकोमा धन्यवाद, म डेरातिर हिडेँ अब ।”
“भो भयो यति राती के घरमा जानुहुन्छ ? आज यतै बस्नुस, हजुर खाटमा सुत्नुहोला म भुँइमा सुत्छु ।” अन्तिम गाँस चपाएर निलेपछि उसले यो पनि भनी – कि गल्लीमा लागूपदार्थ सेवनको दुव्र्यसनमा फसेका टन्नै अल्लारे केटाहरु हुन्छन, र राती हिड्ने बटुवाहरुलाई पिट्ने अनि लुट्ने काम गर्छन ।
अब भने मेरो मुटुमा ढ्याङग्रो बज्न थाल्यो । उसको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै भनेँ, “लौ उसोभए मलाई भोली बिहानै उठाईदिनु पर्छ नी फेरि, हैं ?”
उसले खिस्स हाँसी । र, मैले पनि मुस्कुराउन बिर्सिनँ ।
के के कुरा गर्दागर्दै रातीको सबा एक बजेको पत्तै पाइँन । उसले आफ्ना संघर्षका थुप्रै कथाहरु सुनाई । घरमा आयश्रोत नहुँदा आफ्नी विधुवी आमाले झेल्नुपरेको आर्थिक कठिनाईका बारेमा पनि सुनाई । र, मर्माहत कुरो त आफ्नो यौन प्यास मेटाएर दशजोड दुईमा पढ्दै गर्दा आफ्नो केटा साथीले आफूलाई कसरी धोखा दियो भन्ने पनि बताई ।
उसले भनी – “सब साला लोग्नेमान्छेहरु सेलफिस छन यहाँ । उनीहरुलाई प्रेम गर्नै आउँदैन । प्रेमको नाममा आफ्नो वासनालाई शान्त पार्न केटीको साथ खोज्छन् ।”
मैले प्रतिकार गरेँ – “हेर सबैजना उस्तै हुँदैनन् । यसरी एउटा केटामान्छेको गल्तीको दोष सबै केटा मान्छेहरुलाई लगाउन मिल्दैन । र, केटीहरु पनि सबैले निस्वार्थः प्रेम गरेका हुँदैनन् ।”
उसले मेरो कुरा मान्दै मानिने, भनी – “हजुर जे भन्नुस, तर केटाहरु भनेका यौनका भोखाहरु नै हुन् । उनीहरु प्रेममा हैन यौनको भोकमा विश्वास गर्दछन् । सेक्स विनाको प्रेम इमाजिन पनि गर्न सक्दैनन”
अब चाँहि मैले केहि बोलिनँ । ऊ भुँइमा विछ्यौना बनाउँदै थिई । मैले मेरो ल्यापटप खोलेँ र वल्र्डलिङ्कको मेरो वाईफाईबाट नेट सर्फिङ गर्न थालेँ । बिछ्यौना मिलाईसकेपछि ऊ मसँगैको खाटमा बस्न आई र अनुरोध गरी – “नेट कनेक्सन छ भने दिनुन, कत्ति भो साइबर गएर फेसबुक नचलाएको । यो मोबाइलमा भनेजस्तो मजै नहुने । अनि साँच्ची हामी पनि फेसबुकमा साथी बनौं न ।”
मैले फेरि पनि नाइँनास्ती गरिनँ । बरु, आग्रह गरेँ – “लौ यति राम्री मान्छेको फेसबुकमा राखेको फोटोहरु पनि हेरौँ न त !” ऊ लजाए झैँ गरी ।
सत्तरी जना जति साथी रहिछन् उसका । भनी – “म हत्तपत्त फेसबुकमा कसैलाई पनि साथी बनाउँदिन । धेरै कम मान्छेहरुले मात्र मेरो व्यक्तिगत जीवनशैली जानुन, बुझुन भन्ने लाग्छ ।”
सातसय भन्दा बढी फेसबुक साथी भएको मैले उसको कुरामा सही थापेँ – “हो नी तर के गर्नु मेरो त चिन्दै नचिनेका पनि साथी छन् फेसबुकमा ।”
सेतीको बगरमा उसकी अर्की साथीसँग पानीमा लुछुप्पै भिजेको तस्वीर डिस्प्ले भैरहेथ्यो, स्क्रीनमा । ऊ नीलो जिन्स र खैरो टिसर्टमा थिई । उसका उदात्त वक्ष पानीले भिज्दा अझ अरु आकर्षक देखिए, मेरा आँखा अकस्मात मेरो छेउमै टाँसिएर बसेकी उसको छातीमा पुगे । असहज मान्दै उसले भनी – “छ्या ! के हेर्नुभएको ?”
मलाई फेसबुकमा मित्रता अनुरोध पठाउनुभन्दा पहिले उसले आफ्ना पचास भन्दा बढि तस्वीरहरु देखाई – कुर्ता सलबार लगाएका, नभ नछोप्ने गरी साडी र ब्लाउजमा सुट गरिएका तस्बिर, अनि पानीमा भिजेका तस्वीरहरु पनि ।
उसका झण्डै पाँच दर्जनजति तस्वीर हेरेपछि, मैले सुझाएँ – “हैन, तिमी त मोडल बन्ने खाले केटी रहिछ्यौ । मोडलिङमा ट्राइ गर्दा हुन्छ नी !” उसले केही पनि बोलिने । मैले केही साहसका साथ आफ्ना तस्बीरमा ब्यक्त गरिएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दै गरेकी उसको गाला मुसारिदिदै फेरि भनेँ – “हैन, तिमीलाई मेरो कुरा मन परेन ?” ऊ लाजले थोरै राती हुन थाली । मैले चाँहि आफू भित्रैदेखि फुल्दै आएजस्तो महशुस गरेँ । उसले असहमती जनाई – “मोडलिङ मन पर्दैन मलाई !”
“ए !” मैले निराश हुँदै भनेँ ।
मैले फेरि मोबाईलामा नजर पु¥याएँ । २ बजिसकेको थियो । भनँे – “हैन, अब त सुत्नुपर्ला !”
“भोली शनिबार के काम छ र हजुरको ? किन आत्तिनुभएको हजुर सुत्नलाई ?” बेसरम उसले भनी । मैले जवाफ फर्काइनँ । एकछिनपछि ऊ आफैले बोली – “सुन्नु न साँच्ची, मेरो साथीले भनेकी इन्टरनेटमा त केके हेर्न मिल्छ रे नी है ? हेरुम न हामी पनि ।”
“खै, मैले पनि हेरेको छैन तर हेर्न चाँहि मिल्छ ।” एकदम भलादमी हुँदै मैले जवाफ दिएँ । उसले उत्सुक हुँदै ल्यापटप मलाई थमाई । मैले गुगल गरेँ । लाखौं भिडियोका लिङ्कहरु भेटिए । त्यसमध्ये उसले भर्खरै लिक भएको नेपाली चलचित्रकी एक सुन्दर नायिकाको सेक्स टेप हेर्न चाहना गरी । मैले त्यही भिडीयो खोलिदिएँ । उसले खुब चाखपुर्वक भिडियो हेर्न लागी ।
पिसाबले निकै चापेकाले मैले सोधेँ – “ट्वाइलेट कता छ ?”
“यसो आँखा लगाउनु न ऊ त्यही कुनामा छ त । यो एट्याच रुम हो ।” अझ झन मलाई बिल्लाउँदै भनी – “पिसाव लाग्यो कि …?” म चर्पीको ढोकामा नपुगिन्जेल उसको हाँसो थामिएन ।
म चर्पीबाट बाहिर निस्केपछि उसले बत्ती निभाउन अ¥हाई । मैले सोही बमोजिम गरेँ । ल्यापटपको स्क्रिनमा चर्चीत नायिकाको एकदम नीजि कार्यालापहरु चलायमान भैरहेथे । उसले खुब सन्तुष्टि मानेर हेर्दै थिई । मैलेपनि उसँगै हेरेँ । स्क्रिनमा त्यो दृश्य चलिरहँदा त्यसको प्रभाव विस्तारै मुस्ताङचोकसम्म आईपुग्यो । ५ मिनेटको गल्लीहुँदै त्यो भान्छा अनि हामी दुई जवान युवायुवती बसेको ठाउँसम्म आईपुग्यो ।
बिहान उठ्दा ल्यापटप हिजो राती उसले भुँइमा बनाएको विछ्यौनामा थियो । अनि ऊ र म चाँहि मलाई बनाएको विस्तरामा ।
Previous articleनाङ्गो तस्बीर – A Suspense Romantic Story
Next articleBhauju ko katha
Be Aware Of Mobile Phone !!
Viral over twitter, four tweets worth sharing on your profile